Ifayibha optic izibane pool fibre optic ufakelo ukutyibilika - China KepuAi Photoelectric
Ifayibha optic izibane pool ifayibha ufakelo nokwadala optic
Ifayibha brand: Mitsubishi
Ifayibha ubukhulu: 0.75mm * 7 imisonto & 1.2mm * 14 imisonto & 1.5mm * 1 imicu
Injini Ukukhanya: DMX 1002 / DMX 502 / DMX 1001 & 75w injini ukukhanya
End afanelekayo: ozikhethela
An ifayibha cable enombala i intambo equlathe enye okanye ngaphezulu imicu nako asetyenziselwa ukuba ukukhanya. Iziqalelo ifayibha enombala bakutshelwe isale ngamnye ngeengcamba iiplastiki equlethwe kwityhubhu ezikhuselayo efanelekileyo kokusingqongileyo eziku apho intambo iza.
Ngokubanzi, siphakamisa usebenzisa 1.5mm * 1 USB, 0.75mm * 3 cable 1.2 * 14 intambo amancinci, aphakathi kunye iindawo ezinkulu, dibanisa 75w / 45w / DMX1002 ukukhanya injini.
Ukuba ufuna ukuhombisa elunxwemeni echibini, siphakamisa usebenzisa Imicu ukuvutha kwicala 10mm kunye DMX 1002 injini ukukhanya.
Nceda usithumele isicelo sakho kunye nemizobo kunye neemfuno, ngoko siza kuthumela kuwe quotatio
3, njani ukufaka ifayibha optic landscape yangaphandle ukukhanya ndedwa?
Previous: Ifayibha chandelier optic yokutyela pendant ukukhanya, kwihotele pendant ukukhanya, ahla- pendant ukukhanya
Okulandelayo: Fiber Umthambo Ukukhanyisa Garden, Park ifayibha optical Izibane
ifayibha optic izibane pool
ifayibha ukukhanya optic pool
ifayibha optic star ukukhanya
iinkwenkwezi ezinesigqubuthelo seplastiki
fiberstars bahlanganisa izibane
ifayibha optic ngaphandle USB
pool fibre optic izibane